योनीको बाहिरी छाला किन कालो हुन्छ ?
प्रायःजसो युवतीहरुले आफ्नो शरीरको रङसँग योनी बाहिरको छाला कालो भएकोमा किन यसो भएको होला भनेर सोच्ने गर्दछन्। योनीको छाला काला हुनु र अन्य कुराहरुमा केही सम्बन्ध हुन्छ कि भन्ने उनीहरुको चासो हुन्छ। यौनसम्पर्क गरे यो कालो हुने पनि कतिपयले सोच्छन्।
तर के यी सोचाइ साँचो हुन त, पुरुषको लिङ्ग र योनीको बाहिरी छाला किन कालो हुन्छ ? महिलामा प्रत्यक्ष रूपमा योनीलाई नै यौन अङ्ग मानिन्छ। महिलाहरूमा योनीबाहेक अन्य विभिन्न अङ्ग पनि यौनका दृष्टिकोणले संवेदनशील हुन्छन्। त्यसमध्ये केही प्रमुखका बारेमा छोटो चर्चा गरौं।
योनीका भागहरु के–के हुन् ?
भगक्षेत्र – पुरुषको तुलनामा महिलाका यौन अङ्गहरू बाहिरबाट हेर्दा त्यति स्पष्ट हुँदैनन्। झट्ट हेर्दा छालाका दुई पत्र एक–अर्कामा टाँसिएको जस्तोमात्र देखिन्छ। यसैलाई हामी समग्रमा भग भन्छौं र यसैको भित्रतिर नै सबैजसो अन्य अङ्ग हुन्छन्। युवतीहरूमा यही भगको माथिपट्टी बोसोयुक्त तन्तुले बनेको क्षेत्र हुन्छ, जसले नै यौन तथा प्रजनन अङ्गहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ। यौनाङ्ग क्षेत्रको यस भागलाई अंगे्रजीमा mयलक उगदष्क ९मोन्स प्यूविस० भनिन्छ। युवतीको भग क्षेत्रमा भएका छालाको पत्रको भित्रतिर ठूलो भगोष्ठ, सानो भगोष्ठ, भगांकुर तथा योनिद्वारजस्ता विभिन्न अङ्ग हुन्छन्।
ठूलो भगोष्ठ – यो भगक्षेत्रको सबैभन्दा बाहिरी भाग हो। यसमा दायाँ–बायाँ गरेर बोसोयुक्त तन्तुले बनेका दुई पत्र हुन्छन्। यी ठूला भगोष्ठहरूलाई बाहिरतिर फर्काउनाले दुवैतिर एक–एक गरेर दुई साना भगोष्ठ देखिन्छन्। यही साना भगोष्ठले भित्री भगक्षेत्रलाई छोपेर राखेको हुन्छ र एक किसिमले सुरक्षा प्रदान गरेको हुन्छ। यी ठूला तथा साना भगोष्ठको छेउमाथि र तलतिर एक–अर्कामा जोडिएका हुन्छन्। यी भगोष्ठको आकृति व्यक्तिअनुसार एकदमै फरक हुन सक्छ। यी दुवै भगोष्ठ यौन संवेदनशील र उत्तेजनाका बेला सामान्य अवस्थाको भन्दा केही ठूला हुन्छन्।
भगांकुर – महिला शरीरमा भएको यो नै सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यौन अङ्ग हो। यो भगक्षेत्रको माथिल्लो भागतिर हुन्छ जहाँनिर भगोष्ठ दुवै तिरबाट एक–आपसमा जोडिन्छन्। यो अंगको काम महिलालाई यौनसुख दिनु नै भएको देखिन्छ। स्पर्श गर्दा वा यौन उत्तेजनाका बेलामा आकारमा तुलनात्मक रूपमा निकै सानो हुने भए पनि यो पुरुषको लिङ्गजस्तै उत्तेजित हुन्छ।
योनी – भगक्षेत्रमा दुईवटा द्वार (प्वाल) हुन्छन् र त्यसमध्ये पिसाब आउनेलाई मूत्रद्वार भनिन्छ, त्यसको मुनितिरको अर्को प्वाललाई योनिद्वार भनिन्छ। योनिद्वार भगक्षेत्रको बीचतिर हुन्छ। यो मांशपेशीले बनेको एकदमै लचिलो यस्तै ३९४ इन्च लामो मार्ग हो। सामान्य अवस्थामा यसका भित्ताहरू एक९अर्कासँग टाँसिएको अवस्थामा हुन्छन्। योनिद्वारनजिकै एकदमै पातलो छालाको झिल्ली हुन्छ, जसलाई योनिच्छेद भनिन्छ।
योनीकाे छाला किन कालो हुन्छ ?
योनीद्वार मात्र बाहिरतिर हुन्छ। हाम्रो बाहिरी छालाको रङ्ग फरक हुने जस्तै भगक्षेत्र तथा भगोष्ठको रङ्ग पनि फरकफरक हुन्छ। छालाको रङ्गअनुसार यी फरकफरक हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि प्याजी, रातो, गुलाबी, खैरो वा कालो–कालो र यी सबै सामान्य हुन्। किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले यौनाङ्गमा उष्नmभलतबतष्यल मा केही परिवर्तन आउने भएकाले केही गाढा हुन्छ। के कुरा पक्का हो भने यौन उत्तेजना हुँदा उक्त क्षेत्रमा बढी रक्त प्रवाह हुने भएकाले यो बढी गाढा रङ्गको देखिन्छ।
तर यौनसम्पर्क गरेका कारण नै यो सधैं कालो हुने होइन। अनुहारको छालाको रङ्ग श्रृंगार गरेर परिवर्तन गरेजस्तै भगक्षेत्रको रङ्ग परिवर्तन गर्ने एक सजिलो उपाय श्रृङ्गार गर्नु हो। तर अनुहारजस्तो यसलाई देखाएर हिँड्नु नपर्ने भएकाले यसको रङ्ग परिवर्तन गर्नु तथा रङ्गका बारेमा चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। शंका लागे चिकित्सकसँग परीक्षण गराउनु बेस नै हुन्छ।
सेतो पानी किन बग्छ ?
अधिकांश महिला योनीबाट सेतो पानी बग्ने समस्याबाट पीडित छन्। योनी र पाठेघरमा हुने संक्रमणले महिलामा यस्तो समस्या देखिन्छ। सेतो पानी बग्न थालेमा महिलाको योनिमा संक्रमण बढ्न थाल्छ। यस्तो समस्याको समयमै उपचार गरिएन भने पाठेघरको क्यान्सरसमेत हुन सक्छ।
सामान्यत महिनावारी हुनुभन्दा पाँच दिनअघिदेखि महिनावारीपछिको १४ दिनसम्म धेरै पानी बग्न सक्छ। कहिलेकाहीँ महिलाको योनिबाट चिप्लो पानी पनि बग्न सक्छ। यस्तो पानीको गन्ध आएन भने यसलाई समस्याको रूपमा नलिँदा हुन्छ । तर, पानी बग्ने समयमा योनी चिलाउने, पोल्ने, योनीबाट निस्केको पानी गनाउने भयो भनेचाहिँ चिकित्सककहाँ जाँच गर्न गइहाल्नुपर्छ।
समस्याबाट बच्नका लागि शारीरिक सम्पर्क गर्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ। धेरै मानिससँग शारीरिक सम्पर्क गर्दा योनीमा संक्रमण हुन सक्छ। महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या सिर्जना हुन सक्छ। यौन सम्पर्कका कारण संक्रमण भएमा योनीबाट पिपजस्तो पदार्थ पनि बग्न सक्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि खतरनाक मानिन्छ।
मधुमेह भएका कतिपय महिलामा पनि सेतो पानी बग्ने समस्या हुन्छ। यस्ता महिलामा रोगसँग लड्ने क्षमताको कमी हुन्छ र सेतो पानी बग्ने समस्या हुन्छ। सेतो पानी बग्ने समस्याबाट बच्न योनीलाई सफा राख्नुपर्छ। सकेसम्म दैनिक रूपमा अन्डरवेयर परिवर्तन गर्नुपर्दछ।
योनी सफा गर्दा सचेत हुनुपर्ने के छ भने कहिल्यै पनि योनिमा साबुन प्रयोग गर्नु हुँदैन। साबुनले सफा गरेमा योनी सुक्खा हुन्छ र चिलाउने समस्या हुन्छ। अनि, सेतो पानी बग्न थाल्छ। यस्ता यौन समस्यामा हामीले खुलेर छलफल गर्नुपर्छ।